၁၀၀ ရင်းလျင် ၁၀၀၀ မြတ်စေရမည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ၁၀၀ ရင်းလျင် ၁၀၀၀ မြတ်စေရမည်	11
၁၀၀ ရင်းလျင် ၁၀၀၀ မြတ်စေရမည်
Posted by အာဂ on Apr 11, 2015 in Creative Writing | 11 comments
ကျုပ် အခုအလုပ်ကထွက်တော့ မယ့်ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ ဒီထက်ခွင် ကောင်း တဲ့ အလုပ်လေး ရလို့ ။ အဲ့ဒါဘာအလုပ်လည်း ဆိုတော့ ဆင်ဖြူဖမ်းတဲ့ အလုပ်ပဲ။ အကယ်လို့ ဆင်ဖြူဆိုတဲ့ အကောင် အဲ့ ဖြူဖြူ ကောင် မတွေ့ရင်လည်း ပန်းရောင် ဖြစ်ဖြစ်။ ခရုသင်းကွက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။
နောက်ဆုံး အဲ့လိုကောင် မတွေ့ရင်လည်း အမည်းရောင် ကောင်တွေဖမ်းပြီး တရုတ်နည်းပညာ နဲ့ ဖြူအောင်လုပ်တဲ့ဆေး ကျူပ်မှာ ရှိတယ်။ ဒီလိုလူထက်နှိမ့် တဲ့ သတ္တဝါ ကို မှာ ယုံကြည် ကိုးကွယ်နေကြသူတွေ အတွက်ပေါ့ဗျာ။ ဥပမာ ကျူပ် တို့တိုင်းပြည်က အဘ တို့ ယိုဒယား က လူတွေ ပေါ့ဗျာ။ ထားပါတော့ဒါကလည်း အရင် အရင် မြန်မာမင်းတွေ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်နဲ့ ကစားခဲ့တာမျိုး ပရောဟိတ် တွေပဲ ဟောခဲ့ သလိုမျိုး ဆင်ဖြူ များများပိုင်ရင်ပဲ။ တိုင်းပြည် ကြီးပွားတိုးတက် ဖွံ့ဖြိုး စည်ပင်သပေါ့ဗျာ။ အခုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆင်ပေါ့ဗျာ။
ဆင်ဖြူ ဆိုလို့ စင်ကာပူ ကိုလည်းတွေးမိတယ်။ ဒင်းတို့ မလည်း ဆင်ဖြူမပြောနဲ့ ဆင်မည်း တောင် မနည်းရှာလို့မှ မရှိတဲ့ နိုင်ငံ တိုးတက်ငြိမ်းချမ်းနေတာ အံ့သြ စရာ ဗျ။ တွေးစရာ က စင် နဲ့ ဆင် အသံထွက်ချင်း တူတူစ လို့ များလားပေါ့လေ။ ဆင်တွေပဲကာ ထား လို့ တိုင်းပြည်က ပူပူ ဖောင်းဖောင်းနဲ့ စီးပွား တွေပေါကြွယ်နေသလိုပေါ့။ တချို့ ကလည်း စင်္ကာပေါ လို့ ခေါ်တော့လေ။ ထားပါတော့ ပြောရင်းနဲ့ လိုရင်း မရောက်ဖြစ် နေတယ်။ ပြောချင်တာက အခု ကျူပ်တို့ တိုင်းပြည်မယ်။ ဆင်ဖြူ တစ်ကောင် ထပ်တွေ့ လို့ ငြိမ်းချမ်း ရေး ရ သဗျို့ လို့ ဦးရဲထွဋ် တို့ထုတ်တဲ့ သတင်းစာ မှာ ဖတ်လိုက် ရတော့ ကျူပ်ဖြင့် ဝမ်းသာမဆုံးပဲ။ အဲ့ ဆင်ဖြူမိဖို့ ကုန်ကျစားရိတ်ကလည်း မနည်းဘူးဆိုဘဲ။
ဒီတော့ အင်တာနတ်သတင်းတွေ ။ ပြည်ပမီဒီယာ တွေကလည်း အရမ်းစိတ်ဝင်စားပြီး ဖော်ပြကြတာပေါ့။ ဘာလည်း UN တို့ ဘာလုပ်နေလဲ။ တစ်ကန်ဘာလုံး ငြိမ်းချမ်းဖို့အရေး ပိုက်ဆံ တွေ အများကြီး သုံးနေလဲ။ စသဖြင့် ဝေဖန်သံ တွေ ထွက်လာ နိုင်တယ်လေ။ ဒီတော့ ဘန်ကီမွန်း တို့ လည်း အကျပ် ရိုက် နိုင်သပေါ့ဗျာ။ ဒါက ကကျနော့် အတွေးပါ။ မကြာခင်မှာလည်း ဒီလိုအသံ တွေ ထွက်လာ နိုင်တယ်လေ။ မြန်မာပြည်ကို ကြည့်ပါလား။ ဆင်ဖြူ တစ်ကောင်ရတာနဲ့ တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်း သွားတယ်။ အကုန်အကျ။ အသေအပျောက်လည်းနဲ တယ်။ ဒီတော့ ကန်ဘာ ပေါ်က မငြိမ်သက် ။မအေးချမ်း တဲ့ တိုင်းပြည် တွေ ကို စစ်ရေး။ နိုင်ငံရေး တွေနဲ့ ရှင်း နေမယ့် အစားဆင် ဖြူ တွေရှာပို့ ကြပါလား။
စသဖြင့် ပြောလာကြတော့မှာသေချာသမို့။ အခုကတည်း က စွန့်ဦး စီးပွားရေးဆန်ဆန် နဲ့ ကျူပ် က စပြီးတော့ ဆင်ဖမ်းပါတော့မယ်။ ဆင်ဖြူတော် ရှာဖွေ ရေး ကုမ္မဏီ ပေါ့လေ။ တင်ပို့ မယ် နိုင်ငံ တွေကတော့ အရှေ့ အလယ်ပိုင်းက ဂါဇာကမ်မြောင် ဒေသ။ အစ္စရေး ။ ပါလက်စတိုင်း။ ဆီးရီးယား။ လစ်ဗျား။ ကွန်ဂို။ အီဂျစ်။ ရုရား။ယူကရိမ်း။ အီရတ်။ အာဖရိက ကမငြိမ်သက်သော နိုင်ငံ များး စသဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်ကိုထိုးဖောက်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ သို့ပါသော်ကြောင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလိုသူများ ကျုပ်ထံ အမြန်ဆက်သွယ်ကြပါကုန်။ ၁၀၀ ရင်း လျင် ၁၀၀၀ မြတ်စေရ မည်ဟု အာမခံပါသည်။ ဆင်ဖြူ တော်ရှာဖွေရေး ကုမ္မဏီ
Mr. R.Gaု
အာ ဂ has written 176 post in this Website..
ဘ၀ ကို အခုမှ စပြီး ချရေးနေတာ ။ ဗလာစာရွက်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ကြမ်းတယ်။
CJ # 8112011
View all posts by အာဂ →	Blog
Alinn Z says: ဆင်ဖြူ အကောင်တရာလောက် ရှာတွေ့လည်း
ပူမြဲပူနေမယ့် တိုင်းပြည်ထဲ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည် ပါနေတယ်လို့
အမိန့် အာဏာ ပေးနိုင်သူ ဘဘကြီးတို့နေရာမှာ
အဲ့ ဆင်ကြီးတွေ အစားထိုးပလိုက်ရင်တော့
မဟုတ်က ဟုတ်က အမိန့်တွေ ထွက်မလာလောက်တော့ဘူး
ဆိုတော့ ဆင်ဖြူတွေနဲ့ အစုံလိုက် ချိန်းပစ်လိုက်ရ
ဗမာပိုက်ဆံတွေမှာ ဆင်ဖြူတံဆိပ်တွေ ဒလောက် ရိုက်နှိပ်ကိုးကွယ်နေတာ
ဘာလို့များ ဒေါ်လှတွေထက် နိမ့်ကျနေရတာတုန်း
naywoon ni says: အင်း ​ပြော​တော့ ဆင်​ဖမ်းမယ်​ ကျားဖမ်းမယ်​ မီးရထားဇလီဖားတုံး သွားကြားထိုးမယ်​နဲ့ ဒီလို​ပြော​ပြောပြီး လိမ်​သွားတာ​တွေ အများဂျီး ယုံဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: သိပ်တော့လည်းအထူးကြီးတော့ မဟုတ်ပါဘူး..
ဘာများအဆန်းလိုက်လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: စီးပွားရေးဈေးကွက်ကို မြင်တတ်တဲ့ CEO ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို သဘောကျလွန်းလို့ ရှယ်ယာဝင်ပါရစေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 997
kotun winlatt says: အာဟိ တယုတ် နည်းပြင်ညာနဲ့ ဖြူအောင် လုပ်တဲ့နည်းပါ ရထားဒဒဲ့ ရှဟ်ယာဝင်ဘာယဇီ
ခင်ဇော် says: ဆင်ဖြူအယောင်ဆောင်ကို ရှာဖမ်းတာမှ ပင်ပန်းသေးးး
ရှိတဲ့ ဆင်တွေ ဖြူအောင် လုပ်တဲ့ ဆေးရောင်းရတာ ပိုမလွယ်ဘူးလားးး
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3552
ဦးဦးပါလေရာ says: .ဆင်ဖြူဆိုတာ ဆင်ထဲမှာ ရှားတဲ့အကောင်မျိုးပါပဲ..
.တိရစ္ဆာန်ရုံ zoo မှာ ပြထားသင့်ပါတယ်။…
.အဲသည်အကောင်ကို အလွန်အထင်ကြီး အလွန်သံယောဇဉ်ကြီးတဲ့သူတွေကိုလဲ
.ငှားစား ရောင်းစား သင့်ပါတယ်….။
.အရင်သမ၀ါယမခေတ်တုံးက ဆပ်ပြာနဲ့အပ်ချည်လုံး တွဲရောင်းသလို…မျိုး…
.ဆင်ဖြူတွေနဲ့ ဆင်ဖြူရှင်တွေကို အတွဲလိုက်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပြောပါတယ်.. ပဒေသရာဇ်ခေတ်ထဲက မထွက်သေးပါဘူးဆို… ဆင်ဖြူတော်ကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအမည်ခံ အစိုးရ… ဟေးဟေး.. ဂင်းနစ်စံချိန်တင်လောက်တယ်….
မြစပဲရိုး says: အဲဒီ ရက်က သတင်းထဲ ဒီ ဆင်လေး ကို တယုတယ ဆုလာဘ် တွေ ပေး ပြီး ကျွေးမွေး နေကြတာ ကြည့်ပြီး
နိုင်ငံ ထဲက ငတ် နေ တဲ့ လူ တွေ ကို အားနာ နေမိတာ။
ဒါဟာ “ကံ” ဘဲ လို့ ဆိုရင်တော့ ဒီလောက် ညံ့တဲ့ သူ မရှိတော့ဘူး။
ငတ် သူ တွေ မငတ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တာ ကို မလုပ်ဘဲ နေကြ တာကို မသိဟန် လုပ်နေကြတာ။
မြစပဲရိုး says: . မြန်မာပြည်ထဲ ဘာမှ ရင်းစရာ မလိုဘဲ အလုံးအရင်း နဲ့ကို မြတ်နေသူ တွေ ရှိနေမှတော့ ၁၀၀ ရင်း ပြီး ၁၀၀၀ မြတ်တာလောက်တော့ သူတို့ ရီ နေလိမ့် မယ် “ဂဂ” ရေ့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: ကိုအာဂါးရေ